Toerana mahafinaritra indrindra eran-tany | News Travel
Mariela Carril | 05/05/2022 17:00 | Nohavaozina amin'ny 05/05/2022 17:59 | Toerana fitsangatsanganana, mpitarika
Ao amin'ny tontolo anjakan'ny sary, dia mavesatra be izany rehefa manomana dia. Iza no tsy voataonan'ny tontolon'ny tany ka nandamina ny zava-drehetra ho eo? Ankoatra ny zavatra azontsika vidiana, ny fomba fijery, ny tontolo iainana, ny traikefa, no manosika antsika handeha. Ireo fotoana ireo dia naato tao amin'ny fandaharam-potoananay manokana.
Andeha hojerentsika anio ny tany tsara tarehy indrindra eran-tany. Angamba ianao tsara vintana ary efa nihaona manokana tamin'ny sasany. Na tsia?
1 Tendrombohitra Kirkjufell
2 Cliff of Moher
4 Farihy Plitvice
Ity tendrombohitra ity dia any Islandy ary manararaotra izao fotoana izao aho hilazana fa manana tanimbary tsara tarehy i Islandy. Raha tianao ny zavaboary manafoana ny ainao dia hanomana dia izao aho. Izy dia fantatra amin'ny anarana hoe ny "tendrombohitra fiangonana" ary any amin'ny morontsiraka avaratr'i Islandy izy io, akaikin'ny tanànan'i Grundarfjörour, adiny roa monja miala ny renivohitra.
Ny tsara indrindra dia ny mahafantatra izany amin'ny fanaovana ny fitetezam-paritra feno ao amin'ny Saikinosy Snaefellsnes, ary raha manakarama fonosana ianao dia azo antoka fa tafiditra ao satria voalaza fa Io no tendrombohitra azo alaina indrindra ao amin'ny firenena. Ny tendrombohitra dia manana Metatra 463 ary ny sariny voapaika eny amin’ny lanitra dia natao ho mpitari-dalana sy marika hatrany ho an’ireo mpandeha an-tanety sy an-dranomasina. Eo am-pototry ny tendrombohitra dia misy farihy izay, amin'ny andro mazava, dia maneho tsara ny Mt.
Ankoatra izany, dia tendrombohitra izay miova loko araka ny vanim-potoana: Maitso amin'ny fahavaratra, volontsôkôlà sy fotsy amin'ny ririnina ary tena mahavariana amin'ny andro iposahan'ny masoandro amin'ny misasakalina, manodidina ny equinox jona. Ary tsy lazaina intsony eo ambanin'ny hazavana avaratra mampihoron-koditra!Teo anelanelan'ny Septambra sy Aprily.
Eo akaikiny, dia an-tongotra moramora ny Riandrano Kirkjufellsfoss. Ireo riandrano ireo dia misy fitsambikinana kely telo sy riandrano malefaka, fa ny fahasamihafan'ny haavony no tsara indrindra amin'izany. Raha liana amin'ny fiakarana ianao, dia azo atao ny manao izany ary mankafy ny fomba fijery tsara, na eny an-tendrombohitra na eny amin'ny riandrano.
Farany, zava-misy: ny tendrombohitra miseho amin'ny vanim-potoana faha-7 amin'ny Game ny ny seza fiandrianan'ny, ao amin'ny fizarana "Behind the Wall".
Ity tontolo mahafinaritra sy mahavariana ity dia any irlandy ary tafiditra ao anatin'ny faritry ny faritr'i Burren. Mijery ny Atlantika izy ireo ary mihazakazaka manamorona ny morontsiraka 14 kilometatra. araka ny jeolojia niforona tokony ho 320 tapitrisa taona lasa izay ary ankehitriny ny UNESCO dia mampiditra azy ireo ao amin'ny Burren Global Geopark.
Izy ireo no hantsana malaza indrindra ao amin'ny firenena ary anisan'ny malaza indrindra eran-tany. Afaka misoratra anarana amin'ny Cliffs of Moher Experience, andro iray no lany eto, ary ny ankizy tsy mandoa ny fidirana. Misy Tambajotra 800 metatra ny lalana azo antoka sy rarivato izay mamela anao hankafy ny toerana, jereo ny Nosy Aran, Galway Bay sy Maamtaurks eny lavitra eny ary na dia Kerry any lavitra.
maro no atolotra Fitsidihana tarihina, mba hianatra momba ny tantaran'ny hantsana sy ny faritra mihitsy, ny morontsiraka andrefan'i Irlandy, akaikin'ny tanànan'i Liscannor, ao amin'ny County Clare. Afaka mankany amin'ny fiara, bisy, bisikileta, moto na fiara ianao. Na mandeha an-tongotra koa.
Mba hahatonga ny fitsidihana ho andro tsara dia afaka mitsidika foana ny vohikala ofisialin'ny vinavinan'ny toetrandro ary mamela anao handamina tsara kokoa ny tenanao. Tsara ihany koa ny mitsidika ny hantsana ivelan'ny ora maika, ary mazava ho azy, amin'ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro dia miavaka ny tontolo.
Afaka mandoa ny fidirana feno ianao, izay ahitana ny fitsidihana ny Visitor Center sy ny fampirantiana zava-misy virtoaly sy ny teatra, miaraka amin'ny dia an-tongotra amin'ny lalana sy ny fidirana amin'ny O'Brien Tower sy ny terrace, torolalana amin'ny feo, sarintany ary fampahalalana. 7 euros daholo.
Ity faritry ny farihy ity dia any Aotrisy ary carte postale io. Ao amin'ny distrikan'ny tendrombohitra any Salzkammergut, akaikin'ny Lake Hallstatt ary akaikin'ny toeram-pitrandrahana sira mahafinaritra. Hatramin'ny taonjato faha-XNUMX dia tsy nisy afa-tsy tamin'ny sambo na tamin'ny lalan-tendrombohitra tena tsy mahazo aina, fa nanomboka niova ny zava-drehetra tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny fananganana lalana izay nokapaina tamin'ny vatolampin'ny tendrombohitra mihitsy.
Tsara ilay toerana. Ny tanàna dia manana kianja mahafinaritra misy loharano eo afovoany, ny sasany Fiangonana taloha, amin'ny fomba Gothic sy neo-Gothic, ossuary tsara tarehy misy karandoha 1200, tilikambo tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay misy toeram-pisakafoanana iray ankehitriny, ny farihy mihitsy, izay mahafatifaty sy feno trondro, misy riandrano ihany koa ary anisan'ny isa vaovao sy mpizahatany. ny 5 Fingers Lookout, misy tany mangarahara ary miendrika rantsantanana mipoitra avy eny an-tendrombohitra.
Farany, ny fitsidihana ny Toeram-pitrandrahana sira Tsy azonao adino. Voalaza fa izy ny toeram-pitrandrahana sira tranainy indrindra eran-tany satria efa misy fanararaotana fito arivo taona. Afaka mandeha an-tongotra na amin'ny funicular ianao ary misy tranombakoka ao anatiny.
Ireo farihy mahafinaritra ireo dia any Kroasia ary manangana valan-javaboary izay valan-javaboary tranainy indrindra eto amin'ny firenena. Nampidirin'ny UNESCO ao anatin'ny lisitry ny lisitra ihany koa izy ireo Lova maneran-tanyENY Ao amin'ny faritra karst eo afovoan'ny firenena ireo farihy, eo amin'ny sisin-tany amin'i Bosnia sy Herzegovina.
Ny faritra arovana dia manana efa ho 300 arivo kilometatra toradroa, miaraka amin'ireo farihy sy riandranony. dia isaina Farihy 16 Amin'ny fitambarany, ny fiforonan'izy ireo dia vokatry ny fihaonan'ny renirano sy renirano maro ambonin'ny tany, fa koa ambanin'ny tany. Mifamatotra indray ireo farihy ary manaraka ny fikorianan’ny rano. Anisan-dry zareo dia misaraka amin'ny tohodrano travertine voajanahary, napetraka tao amin'ny ahidrano, bobongolo ary bakteria nandritra ny taonjato maro.
Ireo remby voajanahary ireo dia marefo ary saika velona, ​​mifandray amin'ny rivotra sy ny rano ary ny zavamaniry. Izany no mahatonga azy ireo hitombo hatrany. Azo lazaina fa mizara roa ny fitambaran’ireo farihy, ny iray ambony ary ny iray ambany. midina avy amin'ny haavo 636 metatra ka hatramin'ny 503 metatra amin'ny halavirana 8 kilometatra. Ny reniranon'i Korona dia miforona amin'ny rano mivoaka avy ao amin'ny farihy amin'ny haavony ambany.
Ary eny, ireo farihy Kroaty ireo malaza amin'ny endriny sy ny lokony izy ireo, maitso, manga, turquoise, miova foana ny loko arakaraka ny habetsahan'ny mineraly ao anaty rano sy ny tara-masoandro. Ireo farihy kosa dia 55 kilaometatra eo ho eo avy eo amin’ny Ranomasina Adriatika sy ny tanànan’i Senj any amorontsiraka.
Amerika Atsimo dia manana tontolo tsy mampino ary ny iray amin'izy ireo dia ao amin'ny fanjakana kely Bolivia. Izany dia efitra sira lehibe, avo indrindra eran-tany, miaraka amin'ny velarantany 10 arivo 500 metatra toradroa.
Ny fisaka sira dia mipetraka amin'ny 3650 metatra ny haavony ary dia ao amin'ny faritanin'i Daniel Campos Boliviana ao amin'ny departementan'i Potosi, any amin’ny faritra avo any Andes. Efapolo arivo taona lasa izay dia nisy farihy iray teto, Farihy Minchín, tatỳ aoriana dia nisy farihy iray hafa, ary tamin’ny farany dia nitsahatra tsy ho mando ny toetr’andro ary nanjary maina sy nafana, ka niteraka ny sira.
Toa ny sira misy sira 10 tapitrisa taonina eo ho eo ary 25 arivo taonina no alaina isan-taona. Tsy ny sira ihany anefa ankehitriny no zava-dehibe, Uyuni koa dia manana lithium ary ny lithium dia tena ilaina ho an'ny bateria amin'ny fitaovana ara-teknolojia rehetra. Ankoatra izany, ampiasaina amin'ny fandrefesana zanabolana izy io satria avo dimy heny noho ny ranomasina noho ny tanjona mitovy.
Ny salar dia manana hateviny izay miovaova eo anelanelan'ny latsaky ny iray metatra sy folo metatra ary 120 metatra ny haavony manontolo, eo anelanelan'ny sira sy ny fotaka. Ity brine ity dia misy boron, potassium, magnesium, sodium ary lithium, ankoatra ny hafa.
Mazava ho azy fa iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra any Bolivia izy io ary tsy misy areti-mifindra manodidina ny 300 arivo ny olona mitsidika azy isan-taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Toerana mahafinaritra indrindra eran-tany